राम्रो आम्दानी हुने लोभमा श्रीमती ईजरायल -पठाउदा , श्रीमती ईजरायली ट्याक्सी ड्राईभर सँग… – Todays Nepal
राम्रो आम्दानी हुने लोभमा श्रीमती ईजरायल -पठाउदा , श्रीमती ईजरायली ट्याक्सी ड्राईभर सँग…
तर, मेरो त्यो सपना सपनामै सिमित रह्यो । खोइँ कुन बैरी आइलाग्यो या मेरो दशा ? घरमा घरब्यवहार सम्हाल्ने मेरो बृद्ध बुबा हुनुहुन्छ । उहाँकै जिम्मा सम्पूर्ण घरब्यवहार सुम्पेर चुनुउषा र म विदेशिएका थियौं । तर, चुनुउषा इजरायल गइसकेपछि उनले नेपाल (घर) मा मेरो बुबालाई पैसा पठाउन छोड्नु भयो । दिन प्रतिदिन बिनाकारण म र मेरो परिवारबाट टाढिँदै जान थालिन् ।
वाह, चुनुजी इजरायलीसँग मायाजालमा परे भन्दै भएको घरबार तहसनहस बनाउने । घरमा रहेका बृद्ध सासुससुराको सडक बास बनाउने यही हो मायाजालको नाममा, पैसाको नाममा मानवियता ? अलिकति भएपनि हाम्रो बिगतलाई हेर्नुस् । त्यो इजरायलीको क्षणीक मायारुपी भ्रममा नपर्नुस । एकपटक सोच्नुस त ती बृद्ध सासुससुराले के नै बिराएका थिए र आज उहाँहरुलाई घरबाट निकालेर रोडमा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यही हो सामाजिक न्याय र मानवियता ? यसको जवाफ म कहाँ र कसरी लिउँ ?
चुनुजी आफैं बिनाकारण मबाट अलग हुने फेरी मेरा बृद्ध बुबाआमालाई जे पनि गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने । छोरालाई पनि विभिन्न प्रभोलनमा पारी मेरै बिरुद्ध लगाउने । यो कहाँको कस्तो न्यायसंगत हो ? म गाडी दुर्घटनाका कारण कुँवेतमा साह्रै पीडामा छु त्यसैमा हजुरले नूनचुक छर्ने ? मैले त्यस्तो के नै बिराएको थिएँ र पीडामाथि पीडा थप्ने गरी ? एकपटक चिसो दिमागले सोच्नुस् । मेरो आग्रह छ त्यो इजरायलीको क्षणीक भ्रममा नपर्नुस ।
आज तिमी पनि भएभरको दोष मलाई थोपर्दै छौं रे । अब त तिमी सानो पनि छैनौं । २०/२१ वर्षको लक्का जवान भइसक्यौं । एकपटक सोचन है के तिम्रो मामुले गरेको काम ठीक हो र ? मैले र मेरा बृद्ध बुबाआमाले के नै नराम्रो गरेका थियौं तिमी र तिम्रो मामुलाई ?
म जस्तो सामान्य मान्छेलाई आज तिमी र तिम्रो मामु भएर मलाई किन जिउँदै बारबार मार्दै छौं ? हुन त मसँग तिम्रो मामुको जस्तो इजरायली पैसा छैन होला तर इमान जमान छ । एकोहोरोरुपमा मामुको बहावकापमा नपरी आफ्नो घरपरिवार सम्झौं । पैंसा नै सबथोक होइन । सत्यतथ्य बुझ ।
मामाघरमा बसेर बारम्बार हजुरबा र हजुरआमालाई धम्क्याउँदै छौं रे । मेरो मामुको बिहे मैले गरिदिएको हुँ तिमीहरुलाई के को खसखस ? धेरै कुरा नगर्नु जतिबेला जे पनि गरिदिन्छु भन्छौं रे । आज त्यो इजरायली नागरिक तिम्रो नजिकको भयो, पालनपोषण गर्ने हजुरबुबा हजुरआमा र जन्मदिने बुबा म टाढाको हैं ? हुन त तिमी मावली घरमा बस्छौं त्यहाँ संस्कारै त्यस्तै छ की क्या हो ? त्यस्तै संस्कार सिक्नु धन्यवाद बाबु ।
अन्तमा, म बाध्यताबश घर आउन नसकेपनि घटनाको वास्तविकता बुझेर मलाई सहयोग गर्ने चितवन समाज इजरायल, माडीको टोल सुधार समिति लगायत सम्पूर्ण इष्टमित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार । आउँदा दिनहरुमा पनि तपाइँहरुले सत्यतथ्य बुझी अझै सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने आशा राखेको छु ।